पूर्वाधार Archives - देश विकास डटकम
राजाराम डंगोल थाक्रे २९ कार्तिक २०७६- थाक्रे गाउँपालिकामा आज विद्यालय पुनर्निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा सदाचार (आईपिइआरआर) कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तरक्रिया गरिएको हो । थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रुपाखेती, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषकान्त पौडेल, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन
पृथ्वी राजमार्गको मुख्य कठिनाइका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकखण्ड विस्तार गरिने भएको छ । साबिक दुई लेनमा रहेको सडक अब छ लेनसम्म विस्तार गरिने भएको छ । सडक विभागका अनुसार सो सडकखण्ड विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ‘ड्रोइङ डिजाइन’ तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति
२८ असोज २०७६, मंगलबार । चीनसँगको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तिहारपछि मात्रै हुने भएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको टिबेट थियानलु कम्पनी लिमिटेडले दशैँ र तिहारको समयमा काम नगर्ने भन्दै आफ्नै देश फिर्ता भएको छ । कामले तिहारपछि निरन्तरता पाउने छ । टोलीले केही समयअघि सडक स्तरोन्नतिको सुभारम्भ गरेको थियो । चिनियाँ
नेपालका लागी राष्ट्रपति सी को प्रतिबद्धताहरु के के छन् त…
२६ असोज २०७६, आईतबार । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको ‘भूपरिवेस्ठित मुलुक’ बाट ‘भूजडित’ मुलुक बन्ने सपना साकार तुल्याउन चीनले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा शानिबार आएका सीले उनको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित राजकीय भोजमा गरेका प्रतिवद्धताहरु यस्ता छन् । १. नेपालले अपेक्षा गरेका बहुप्रतीक्षित हिमालय सीमापार
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण: त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने उडान दुई दिन प्रभावित हुने
२५ असोज २०७६, शनिबार । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण दुई दिन प्रभावित हुने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिबार दिउँसो ४ः३० मा काठमाण्डौ अवतरण गर्ने कार्यतालिका छ । भारतको चेन्नई हुँदै काठमाण्डौ आइपुग्ने सी आइतबार १२ः३० मा स्वदेश फर्कनुहुनेछ । राष्ट्रपति सी शनिबार भारतको तमिलनाडुमा रहेको चेन्नई
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि साउदी अरबद्वारा नेपाललाई ३ अर्ब ४० करोड सहुलियत ऋण प्रदान
२४ असोज २०७६ । साउदी फण्ड फर डेभलप्मेण्टले नेपाललाई ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रदान गरेको छ । साउदी फण्ड फर डेभलप्मेण्टले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्र पुनर्निमाणका लागि नेपाललाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा यससम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री
दशैका लागी सञ्चालित सहुलियत पसलमा कति छुट ?
२३ भदौ २०७६, सोमबार । दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सोमबार देखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा आउँदैछ । काठमाण्डौ उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको सहुलियत पसल कात्तिक १६ गतेसम्म चल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन,
भ्रमण वर्ष २०२० अन्तर्गत सडक सुधार गर्न निर्देशन
२१ भदौ, २०७६ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सडक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यले जोड दिएका छन्। सरकारले भ्रमण वर्षका लागि एक सय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेको छ। ‘ती पर्यटकीय गन्तव्यसँग पुग्ने सडक पूर्वाधार छैन’, समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भन्नुभयो, ‘सडकबिना पर्यटक कसरी गन्तव्यमा पुग्छन् ?